ओली सरकार ‘ढाल्ने कि पर्खने’ विषयमा देउवा र पौडेलबीच विवाद – ramechhapkhabar.com
ओली सरकार ‘ढाल्ने कि पर्खने’ विषयमा देउवा र पौडेलबीच विवाद
नेपाली काँग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच विवाद चर्किएको छ । यसपटकको विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालिहाल्नुपर्ने या परिस्थिति विचार गरेर मात्र बढ्नुपर्ने विषयमा देखिएको छ ।
सभापति देउवा ओली सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा मौन छन् । उनी पक्षधर नेताहरुले अवस्था परिपक्व नभइसकेको तर्क गर्दै आएका छन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीका लागि हतार नगर्ने बताइसकेका छन् । उनले दलहरुको स्थिति हेरेर मात्र काँग्रेस अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल ओली सरकारको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले काँग्रेसले अन्य दललाई नेतृत्वका लागि साथ दिएर भएपनि ओलीलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । महामन्त्री सशांक कोइरालाले १० चैत्रपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउने बताएका थिए । कोइराला पनि ओली सरकारको विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि ओलीलाई हटाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
पौडेल पक्षबाट ओलीको विकल्प खोज्न ढिलाई गर्न नहुने विषय उठिरहँदा देउवा मौन छन् । उनका पक्षधरले हतार नगर्ने बताइरहेका छन् । यसले देउवा ओलीसँग मिल्ने विकल्पसहित रणनीतिक रुपमा तयार रहेको हुनसक्ने अनुमानहरु प्नि लगाइएका छन् । देउवाको यही मौनताप्रति पौडेल पक्ष गम्भीर बनेको छ ।
आज पौडेल पक्षले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी रणनीतिबारे छलफल चलाएको छ । पौडेलनिवास बोहराटारमा महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहका अलावा नेताहरु डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत छलफलमा पुगेका छन् ।